गगन थापा राजीनामा देऊ भन्दै अायाे यस्ताे माग ? युवा नेताको राजिनामा पछि अब के हुन्छ ? – Sanghiya Online
गगन थापा राजीनामा देऊ भन्दै अायाे यस्ताे माग ? युवा नेताको राजिनामा पछि अब के हुन्छ ?
Posted on : March 6, 2018 - No Comment
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा फेरि निर्वाचित भएका छन् । देशको वरिष्ठ प्रजातान्त्रिक दलले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट आफ्नो नेता छान्दा कोही कसैलाई आपत्ति हुने ठाउँ छैन ।
अाजकाे नयाँ पत्रिकामा उमेश चाैहानले लेखेका छन्- संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसको असाधारण पराजयपछि नेतृत्व परिवर्तनका लागि उठेको बिगुल ध्वनि फेरि नेपथ्यमा हराएकोमा पनि कसैलाई आश्चर्य लागेको छैन । आश्चर्य के छ भने, कांग्रेस पुनर्निर्माणको शिलान्यास समारोह सफल पार्न नौमती बाजा बजाउँदै आएको युवा समूहले आफ्नो पहिलो परीक्षामा कुनै प्रभाव छाड्न सकेन । ढोलक बजाउने र दमाहा ठटाउने युवाहरू कान्लामाथि देखिएनन्, सनाई फुक्ने र झ्याली पिटाउनेको अत्तोपत्तो छैन । संसारमा नेतृत्व परिवर्तन कुनै पनि खालको याचनाले होइन, सुस्पष्ट दृष्टिकोण, सुव्यवस्थित योजना र सुनियोजित हस्तक्षेपले मात्र सम्भव भएको छ । सार्थक दृष्टिकोण र योजनाविनाको याचना यस्तै भवितव्यमा पर्छ, जो अहिले परेको छ ।
युवा नेताहरूले देउवाको सत्तालाई चुनौती नदिएका मात्र होइनन्, बागडोर छाड्न देउवासामु अनुरोध पनि गर्न सकेका छैनन्, बरु याचना मात्र गरिरहेका छन् । उनीहरूको पहल सार्वजनिक खपतका लागि हो भने, त्यसले औसत बजार लिएकै छ, तर सार्थक हस्तक्षेपका लागि हो भने कुनै गैरकांग्रेसीले पनि उनीहरूलाई वैधानिक मार्ग देखाउन सक्छ । कांग्रेसको विधानको दफा ४२ अनुसार २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापतिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् र दुईतिहाइ बहुमतबाट पदमुक्त पनि गर्न सक्छन् । त्यस्तै, पार्टी नीतिका विषयमा बहस चलाउने हो भने पनि दफा २० अनुसार ४० प्रतिशत महासमिति सदस्यले चाहेमा तीन महिनाभित्र महासमिति बैठक बसाउन सक्छन् ।
पार्टी नीतिको दिशा र नेतृत्वको दशा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार विधानले नै दिएको छ भन्ने कांग्रेसका धारिला नेताहरूलाई अवश्य पनि जानकारी छ । देशभरबाट आएका बहुमत प्रतिनिधिको अमूल्य मतदानबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको शक्तिमाथि शान्तिपूर्ण हस्तक्षेप गर्न योबाहेक अर्को मार्ग केही छैन । तर, महासमिति बैठक बोलाउन अथवा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नसमेत संख्या पुग्दैन भने नेताहरूले स्वीकार्नुपर्छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक दलमा बल प्रयोग गर्ने बहुमतले नै हो, अल्पमतका लागि त्यो सौभाग्य प्राप्त छैन ।
म्याक्रोन ताजा उदाहरण हुन्, राजनीतिको प्रवाह परिवर्तन गर्ने संसारका कुनै पनि नेता कसैको अनुग्रहबाट नेतृत्वमा पुगेका होइनन् । अझ, हाम्रा नेताले जुन उमेरमा आएर आफूलाई युवा भनी दाबी गरेका छन्, जैविक रूपमा पनि त्यस्तो म्याद लगभग गुज्रिसकेको छ । सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गर्दा कार्ल मार्क्स जम्मा ३० वर्षका थिए भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा पुष्पलाल २५ वर्षका मात्रै । वि.सं. २००३ मा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति बन्दा बिपी कोइराला ३३ वर्षका थिए । ४५ वर्षको उमेरमा देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खानुअघि नै बिपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त विकसित गरिसकेका थिए ।
जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरेर, नेपाली राजनीतिमा सनसनी मच्चाएर संसारबाट बिदा हुँदा मदन भण्डारीले भर्खर ४१ वर्ष टेकेका थिए । प्रचण्ड र बाबुरामले पनि ४० वर्षकै हाराहारीमा नेपाली राजनीतिमा सशस्त्र आँधिबेहरीको शंखघोष गरिसकेका थिए । यस्ता, सबै उदाहरणीय कोशेढुंगा काटिसकेका नेताहरूले हामी युवा हौँ भनेर अग्रजहरूसँग पालो माग्नु राजनीतिक रूपले पनि शोभनीय हुँदैन । नेपाली राजनीतिको सुसंस्कृत कोइराला परिवारमा बिपी कोइरालाले आफ्ना दाजुसँग पनि मागेर होइन, भिडेर शक्ति हातमा लिएका थिए । राजा र भारतको प्रत्यक्ष सहयोग पाएका मातृकाप्रसाद कोइराला बिपीको प्रताप थेग्न नसकेर कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री पदबाट पर धेकेलिएका थिए ।
कुनै पनि नेताले अब चिनाका आधारमा होइन, सिर्जनाका आधारमा आफ्नो अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ । एमाले र माओवादी जुट्ने वा फुट्ने विषयलाई निरपेक्ष राखेर कांग्रेसले आफ्नो भविष्य आफ्नै मुठ्ठीमा केन्द्रित गर्ने हो भने मात्र सुधारको गुन्जायस रहनेछ । कांग्रेसले विजयको ध्वजा फहराउन चाहन्छ भने कम्तीमा युवा भनिएका नेताहरूले एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिभाषा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यो परिभाषाले पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक लगानी मात्र होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत अधिकारका विषयमा पनि कांग्रेसको अवधारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ । के त्यसका लागि उनीहरूसँग इच्छाशक्ति छ ? छ भने अब राजीनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले होइन, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र प्रदीप पौडेलहरूले दिनुपर्छ ।
पार्टी बैठकको नाममा सानेपामा हुने सार्वजनिक सुनुवाइमा पाँच मिनेट बोल्न पाएका वेला माओवादीसँग किन नाता तोडेको, कमल थापासँग किन गला जोडेको भन्दै देउवालाई प्रश्न सोधेर गगन र प्रदीपहरूले मिडियामा स्थान पाउन सक्छन्, तर नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि उनीहरूले केन्द्रीय सदस्यको ब्याच देउवालाई बुझाएर महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा विचारधारा निर्माणको यात्रा तय गर्नुपर्छ । तर, टेलिभिजन स्क्रिनमा आइरहने र अनलाइनमा छाइरहने आफ्नै आदतविरुद्ध पनि संघर्ष गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूले आफ्नै दल र देशको सामन्ती राजनीतिविरुद्ध घुँडा टेक्नैपर्नेछ । यो कांग्रेसका लागि मात्र होइन, देशका लागि सुखद हुन सक्दैन ।
संसारको कुनै पनि देशको जनताले “म मङ्गोल” हुँ भनेर भन्दैन नपत्याए तिमी चाइना गएर ……………
सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरू विघटन ! पहिचानवादी महासभा गठन !! – हरि बहादुर घर्तिमगर
फोरम नेपाल ललितपुरका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार उत्तम लामाको अपिल
१ नम्बर प्रदेशको नामांकरण किरात प्रदेश नै किन ?
दोस्रो चरणको चुनाब ( जेष्ठ ३१ ) र मंच लिम्बुवान
सन्दर्भ नेपालकाे राष्ट्पति काे हाेला भन्ने हाे ?